Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland 'Ihe mere dịka anyị siri hụ na ọ dị njikere' maka nnyefe! : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 November 2019	• 3 Comments
Oge abịaala akwụkwọ ọhụrụ 'Eziokwu dịka anyị siri hụ ya'. Ternyaahụ enyerela m ndị na-agụ akwụkwọ ahụ maka Ebook Reader (ma ọ bụ e-Reader ma ọ bụrụ na ịchọrọ) na nke PDF. Site ugbu a na mbipụta akwụkwọ nke akwụkwọ a dịkwa site na webshop boekbestellen.nl maka ọnụahịa nke € 24,95. N’okpuru, ị ka nwere ike bụrụ onye otu ma nara ụdị e-agụ ma gụọ ụdị PDF. Don't nweghị Ebook Reader? Yabụ na ọtụtụ PC, laptọọpụ ma ọ bụ i-pad, ị ka nwere ike ị gụọ mbipụta Ebook Reader a. N’ikwu eziokwu, m tinyekwara otu PDF ka ị nwee ike ịgụ ya na ntanetị na ngwaọrụ gị ka ị họọrọ. Nke ahụ ga - ekwe omume na i-Pad ma ọ bụ ekwentị.
Akwụkwọ a na-enye ezigbo nchịkọta nke eziokwu adịgboroja na mkpokọta Truman Show nke a na-ejide mmadụ site na mmemme site na akwa ruo na ili. Akwụkwọ a na-enye nkọwa zuru oke, mana karịa ihe niile na-abịa n'ụzọ doro anya.
Onye ọ bụla na-eme ụdị mmemme site na akwa ruo na ili. Akwụkwọ a na-egosi otu esi ahazi mmemme a, otu esi ewulite ihe ike na ụwa na otu esi ejide mmadụ na mkpokọta Truman Show (mgbe ihe nkiri otu aha ahụ sitere na 1998) na mmekọrịta dị n'etiti usoro mgbasa ozi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmegide na-achịkwa. Ọ na - akọwa eziokwu dịka anyị siri ghọta ya site na usoro nke ịme anwansị dabere na 'nnwale nnwale abụọ,' physum physics na site na nsụhọ. Ekwesịrị ka onye ọ bụla tinye aka na mmụọ, okpukpe, ọnọdụ ime mmụọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ebum n’uche m bụ ide akwụkwọ nke enwere ike ịgụ akwụkwọ n’otu ụbọchị na ị nwere ike inye ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi mee ka ha chee echiche. Anyị nwere ihe ịga nke ọma. Akwụkwọ a nwere peeji 148 ma yabụ mfe ịgụ akwụkwọ n’ụbọchị.
Ọ bụrụ n’ị ghọọla otu afọ ma chọọ inweta akwụkwọ ahụ na ụdị akwụkwọ, biko zitere m email nwere adres gị.
N’okpuru i nwere ike ibudata ụdị Ebook Reader ma ọ bụ gụọ ụdị PDF. Nwere ike ịnweta faịlụ abụọ mgbe ị mechara sonye na ya. Enyere ikike ịnweta ọla edo yana mmemme niile kwa afọ. Naanị maka ndị otu ahụ bụ njikọ njikọ nke akwụkwọ ahụ na ala nke isiokwu a. Ndị ọzọ na-ahụ bọtịnụ otu. Mgbe ị ghọrọ onye otu, ịdenye aha n’ezie dịka onye na-enye onyinye, nke ị na-akwado m ka m gaa n’ihu n’ọrụ m. Daalụ nke ukwuu maka nke ahụ!
Mmelite 5 November 2019, 15: oge ​​30: ị nwekwara ike ịtụzi ụdị e-agụ akwụkwọ na PDF site na webshop n'okpuru bọtịnụ acha anụnụ anụnụ.
Ọ bụrụ na iji maatu, ị kwadola site na mbufe akụ na oge ma ọ bụ itinye otu ọnwa ruo oge ụfọdụ ma ịchọrọ ịgụ akwụkwọ ahụ, biko kpọtụrụ anyị site na mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ. Ihe kpatara m ji tinye mmachi a bụ n'ihi na ndị mmadụ nwere ike ịgụ akwụkwọ m maka € 2 site na mbụ ibu onye otu ọnwa wee kagbuo ndị otu ọzọ.
Tags: akwukwo, de, na, agba, kennen, Martin, mba n'efu, eziokwu, wij, dị ka
Ugbu a ọ ga-amasị m ikele gị maka ntachi obi gị na ntinye onwe gị na okwu nweere onwe gị
na i meela ka ọ dịrị mmadụ niile mfe inweta akwụkwọ.
N'uche m, ịchọrọ mmụọ siri ike na nnukwu ikike maka mgbake
Ndị amabeghị mmetọ ha na-egosi iji gosipụta etu ha si emegbu ha
ike nke ukwuu na obodo a na ebe ndi ozo.
na-ekelekwa akwụkwọ gị
Emebeghị m nsogbu ahụ niile nke afọ 7 na-arapara onwe m n'olu na akwa ikuku anaghị enyefe m ya. Kama nke ahụ ... nke ahụ were m nnukwu ụgwọ.
Edeghị m akwụkwọ ahụ n'onwe m, mana kpomkwem ma ọ bụ naanị maka ndị niile ga - achọ inweta ihe ga - enyefe ndị maara nke ọma ọnọdụ anyị nọ na ya.
Hi Martin, enyela iwu akwụkwọ ọhụrụ gị.
Ekele na dị nnọọ na ozi! Ọ dị nnọọ mkpa.
" Lọ ọrụ ndị ntorobịa na-eme mkpọtụ banyere ime ihe ike n'ihi na 'nlekọta' bụ n'ezie mmetọ?
Adobe, Twitter na usoro mgbasa ozi na-ekwukarị na-aga ọgụ dị omimi? »
Nleta nile: 13.856.870